Izimpawu Zesizwe saseNingizimu Afrika
Springbok / Springbuck - Antidocras marsupialis
I-springbok ithola igama layo kusukela kwisenzo sokubiza (ukugqama ukubonisa) okufana nalokhu ku-antelope. Womabili ama-springboks abesilisa nabesifazane anezimpondo, kodwa ngokuvamile, izinqama zinyene futhi zigcwele. I-springbok itholakala ngokwemvelo eFree State, esifundazweni saseNorth West, eKaroo naseNtshonalanga YaseNingizimu Afrika. Ilungele ukuhlala ezindaweni ezomile, ezingenalutho kanye nasemathafeni ahlaza ovulekile.
Badla futhi bapheqa futhi bangaya ngaphandle kwamanzi, njengoba bethola umswakama wabo emaqabunga amnandi abawadlayo. Lapho kukhona khona amanzi, noma kunjalo, i-springbok izoyiphuza. I-Springbok yizilwane zezinkomo ezihamba ngamaqembu amancane phakathi nezinyanga zasebusika futhi zihlanganisa izinkomo ezinkulu ngesikhathi sehlobo zasehlobo.
Bazala unyaka wonke, futhi amawundlu azalwa emva kwezinyanga eziyisithupha zokubeletha. Isisindo esingu-75 cm isisindo 40 kg.
I-Blue Crane - i-Anthropoides ipharadesi
I-crane eluhlaza okwesibhakabhaka cishe itholakale eNingizimu Afrika kuphela. Ingumbala ompunga ohlaza okwesibhakabhaka, onentamo ende ephela ekhanda elinjenge-spherical. Inemilenze ende kanye namaphiko enhle awela phansi. Izigubhu eziluhlaza okwesibhakabhaka zidla ngezinambuzane, izilwane ezinwabuzelayo kanye nembewu.
Babeka amaqanda abo emhlabathini ongenalutho, eduze kwamanzi. Indawo yokuhlala yabo yindawo evulekile nemigodi yaseCaroo. I-cranes eluhlaza okwesibhakabhaka ivame ukutholakala eKaroo, KwaZulu Natali nase-Highveld.
Zivame ukubonwa ngababili noma amaqembu amancane. Ama-cranes ahlaza okwesibhakabhaka ahlala cishe amamitha ambalwa ahlala ethule kodwa ayenayo i-croak ehlukile ekhoneni futhi ebizwa nge-high pitched call, engase izwe kusukela kude.
I-galjoen inomlando wamanzi ogwini laseNingizimu Afrika. Itholakala ikakhulukazi emanzini angajulile endaweni yokungena egudini eliseduze nogwini. Umbala wayo uhlukahluka ngokuvumelana nendawo yokuhlala, eduze kwamadwala kubonakala sengathi ubumnyama ngokuphelele ezindaweni ezinesihlabathi, kubonakala njengombala we-bronze wesiliva.
KwaZulu Natal, i-galjoen nayo ibizwa ngokuthi i-blackfish noma i-bream emnyama. I-Galjoen idla ukudla okubomvu (ama-ascidians), nama-crustaceans amancane afana nama-mussels nama-barnacles. Usayizi wamarekhodi ungaphezu kuka-55 cm ubukhulu obuyi-7 kg, noma kunjalo, usayizi wesilinganiso uvame ukuncane kakhulu.
Giant noma King Protea - Protea cynaroides
Kuzo zonke izindawo zaseNtshonalanga naseMpumalanga Kapa, ​​ngokuyinhloko kusukela kuCederberg kuya ku-Grahamstown i-protea yenkosi ingatholakala. Igama lesiLatini laleli protea, i-cynaroides okusho ukuthi i-cynara (i-artichoke), ivela ekubukeni kwe-artichoke ephethe amakhanda embali. I-protea yenkosi yiyona imbali enkulu kunalesi sifo.
I-Yellowwood Real - I-Podocarpus latifolius
zinhlobo ze-yellowwood zezihlahla zasendulo zanda eNingizimu Afrika iminyaka engaphezu kwesigidi. Inokusabalalisa okubanzi kulo lonke elaseNingizimu Afrika futhi ingatholakala eNtabeni yeThebula, ngasemaphandleni asempumalanga naseningizimu eKapa, ​​emidlaneni yaseDrakensberg, e-Soutpansberg naseBlouberg esifundazweni saseLimpopo.
I-Yellowwoods iyimithi ende ekhulayo, efinyelela eziqongweni zamamitha angaba ngu-40, ibe nesisindo esincane esingamamitha amathathu ububanzi emahlathini. Kodwa-ke, lapho ukhula ezindaweni ezingakapheli ezifana nemithambeka yeTable Mountain zibonakala njengezihlahla ezincane, ezihlahleni nezignarly.
I-bark i-khaki-enemibala iphenduka imbobo emhlophe njengoba isihlahla siphelile, esiphunduka ngokubamba njengoba isihlahla sikhula. Umqhele womuthi uncane uma kuqhathaniswa nokuphakama kwawo okukhulu. Izithelo zibukeka njenge-pine cone, kodwa zimhlophe, ziluhlaza okwesibhakabhaka noma ngezinye izikhathi zibomvu. Umuthi we-yellowwood ukhiqiza izithelo zombili zesilisa nezesifazana, i-female cones izithelo zibukeka ngendlela efanayo nombala ku-cherry.